Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany momba ny Indonezia » Indonezia Vaovao Tsara: Miasa mafy, marani-tsaina & tso-po
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Vaovaom-panjakana • Vaovao farany momba ny Indonezia • Vaovao • People • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • malaza ankehitriny
Novambra 22, 2021
Ny Minisitry ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana, Sandiaga Salahuddin Uno, dia nanentana ireo mpisehatra ara-toekarena famoronana bebe kokoa mba hijery ny lafiny maharitra amin'ny asany, mba hanafainganana ny fanatanterahana ny fizahantany manara-penitra. Izany no nolazain'i Sandiaga rehefa nitsidika ny "Kriya Kayu Rik Rok" tany Magelang, Java Afovoany, Indonezia.
Ny World Tourism Network dia nantsoina hoe HE Sandiago Uno ho minisitry ny fizahantany ara-tsosialy indrindra eran-tany. Izany dia tamin'ny 9 martsa 2021.
Tamin'ny 21,2021 Novambra 4, io minisitra io ihany no nampiditra ny foto-kevitra 11 AS - ny raikipohy mahagaga mba hamerenana ireo mpitsidika XNUMX very any amin'ny fireneny.
Manantena ny minisitry ny fizahantany Indoneziana fa ny 4 AS dia ho soatoavina fototra ho an'ny fizahantany sy ny indostrian'ny famoronana mba hanarenana ny orinasany sy hamelomana ny toekarem-pirenena.
Ny Minisitry ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana ao Indonezia dia manao fiaraha-miasa amin'ny fanatsarana ny faharetana sy ny fifaninanana mba hamporisihana ny fifohazana ny orinasa taorian'ny tratran'ny valan'aretina COVID-19.
Mba hanatratrarana ny tanjona dia namorona fandaharana mifantoka amin'ny foto-kevitra “4 AS” ny Minisiteran'ny Fizahantany Indoneziana: dia ny Kerja KerAS (miasa mafy), CerdAS (miasa marani-tsaina), TuntAS (madinika), ary IkhlAS (fomba fahatsoram-po).
Ny minisitry ny fizahantany ara-tsosialy indrindra dia avy any Indonezia
Ireo fitsipika "4 AS" ireo dia natsangana taorian'ny fiantraikan'ny valan'aretina COVID-19 tamin'ny fizahan-tany sy ny fandraharahana famoronana manerana ny firenena, izay talohan'ny nametrahan'ny fameperana ara-tsosialy sy ara-toekarena handrefesana ny fihanaky ny viriosy, dia nisy mpizahatany tonga 16.11 tapitrisa tamin'ny taona 2019 ary nihena. tamin'ny 75 dia niova ho -4.02%..
Io tarehimarika io dia kapoka mafy ho an'ny toekarena fizahan-tany izay namatsy 5.7% amin'ny harinkarena faobe ao amin'ny firenena ary nanome asa 12.6 tapitrisa tamin'ny taona 2019.
“Mila mihetsika haingana isika mba hahazoana fahalalana sy fahaiza-manao mifandraika amin'ny orinasa. Izany no antony tokony hiraisan’ny mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny famahana ny tanjaky ny fizahantany sy ny indostrian’ny famoronana mba hisian’ny asa ary hiantohana ny hanarenana ny toekarentsika amin’ny alalan’ny fizahantany manara-penitra sy maharitra”, hoy ny minisitry ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana, Sandiaga Uno.
Fampitomboana ny faharetan'ny fandraharahana amin'ny alàlan'ny fanofanana fandraharahana nomerika.
Ny governemanta dia niasa tamin'ny hetsika tamin'ny fizarana famporisihana fanarenana ho an'ny fizahan-tany sy ny indostrian'ny famoronana.
Tamin'ny tapany voalohany tamin'ny taona 2020, ny indostrian'ny fizahan-tany any Indonezia dia niharan'ny fatiantoka manodidina ny 85 trillion rupiah Indoneziana amin'ny fidiram-bolan'ny fizahan-tany, miaraka amin'ny indostrian'ny hotely sy trano fisakafoanana tombanana. fatiantoka manodidina ny 70 trillion Indonezianina Rupiah.
Ny valan'aretina COVID-19 dia nisy fiantraikany mafy tamin'ny sehatra famoronana hafa koa. Noho izany, miasa amin’ny fandaharan’asa fanabeazana isan-karazany koa ny minisitera mba hamporisihana ny fandraharahana manerana ny firenena.
Ny iray amin'ireo fandaharan'asa dia hetsika ho an'ny mpianatra amin'ny sekolim-piantohana Islamika antsoina hoe "Santri Digitalpreneur Indonezia” izay miompana amin'ny fanofanana sy fanoroana ireo “santri” (mpianatra) mba hianatra fahaiza-manao nomerika sy hampiasa azy ireo ho renivola ho lasa mpandraharaha nomerika na hiasa amin'ny indostrian'ny famoronana.
“Manana sekoly fanabeazana Islamika miisa 31,385 i Indonezia ary mamporisika azy rehetra izahay hampivelatra ny toekarena famoronana amin'ny alàlan'ny digitalization. Tafiditra ao anatin’ny ezaka ataonay hampandrosoana ny toekarena nasionaly ireo hetsika rehetra ireo », hoy ihany i Sandiaga.
Nohamafisin’ny Minisitera ihany koa ny fiaraha-miasa amin’ny mpiara-miombon’antoka rehetra amin’ny fanatsarana ny faharetan’ny fandraharahana miainga amin’ny « principales 3 C », dia ny fanoloran-tena, ny fahaiza-manao ary ny tompon-daka, hamelomana indray ny fizahantany sy ny toekarena famoronana, ny fampitomboana ny tanjaka ara-toekarena ary ny famoronana asa.
“Tsy maintsy miara-miasa amin'ny mety ho fandraharahana rehetra efa misy isika mba hamoronana asa vaovao. Amin’ny alalan’ny hevitra vaovao sy famoronana no ahafahantsika manarina sy mampandroso ny toekarena Indoneziana”, hoy i Sandiaga namarana.
Mandray anjara amin'ny resaka WTN ny minisitry ny fizahantany Indoneziana
Momba ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana IndonezianaEntanin'ny vina mba hahatonga an'i Indonezia ho toerana fizahan-tany manara-penitra eran-tany, ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana Indoneziana dia manavao ny fandrosoana isan-karazany mba hampitomboana hatrany ny indostrian'ny famoronana ao Indonezia.
Ny fironana lamaody ho an'ny vehivavy silamo dia mitombo haingana any Indonezia, miaraka amin'ny faniriana hijery tsara tarehy miaraka amin'ny hijab. Satria tsy mitsaha-mitombo ny fitakiana, ny mpamorona eo an-toerana dia manohy mamorona akanjo tsara tarehy sy miavaka ho an'ny vehivavy silamo.
Kriya Kayu Rik Rok, any Magelang, Java Afovoany, dia marika eo an-toerana izay mamokatra sy mamolavola asa tanana vita amin'ny fako manimba ny tontolo iainana manodidina ny tranony. Rik Rok koa dia mirotsaka amin'ny fizahan-tany fanabeazana ho an'ny ankizy te-hivezivezy eo am-pianarana toy ny batik, ny fanaovana vilany, ny fambolena tantely, ny fianarana gamelan, dihy, sy ny hafa.
Ny Minisiteran'ny Fizahantany sy ny Toekarena Famoronana dia manome antoka fa ireo mpilalao indostrian'ny hotely sy trano fisakafoanana manerana an'i Indonezia dia vonona hatrany hampihatra ny fanamarinana protocole ara-pahasalamana mifototra amin'ny CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability).